OwoThongathi ukhulume amazwi ahlabayo kubadlali
UMQEQESHI woThongathi FC uJohnny Ferreira uthi akayizwa indaba yomdlali odlala ibhola aze aliyeke enganqobanga nesisodwa isicoco Isithombe: BACKPAGEPIX
NDUDUZO DLADLA | December 3, 2019
UMQEQESHI woThongathi FC uJohnny Ferreira uthi ukhulume amazwi ahlabayo kubadlali bakhe ngaphambi komdlalo wokuhlungela iNedbank Cup neTshakhuma Tsha Madzivhandila (TTM) abawunqobe ngo 4-3 esikhathini esengeziwe, eVenda ngempelasonto.
Ngokusho kukaFerreira ubatshelile abadlali bakhe ukuthi kufanele bawunqobe umdlalo weTTM ngoba abalazi ibanga abangalihamba, hleze bangalingisa iTS Galaxy enqobe lo mqhudelwano ngesizini edlule ishaya iKaizer Chiefs ngo 1-0 kowamanqamu.
“Ngibachazelile abadlali bami ngaphambi komdlalo ukuthi kumele bewunqobe umdlalo ngoba abalazi ibanga abangalihamba. Ngibatshelile ukuthi akufanele bayeke ibhola bengawinanga nesisodwa isicoco empilweni yabo yebhola.
“Kungakho ngifuna ukuthi bamile umthambo wokuhalela ukunqoba izicoco. Kufanele bathi uma bexoxela izingane zabo basho bethi banqoba isicoco seGladAfrica Championship noma ngabe esani-ke esinye. Ukudlala nje ibhola unganqobi lutho ekugcineni kusiza ngani? Izicoco yinto esiyivukelayo nesigqugquzelayo. Ngiyajabula ukuthi bangizwile abadlali bami, ngoba noma ngabe bekubaba kanjani,kodwa ebengikusho kuyiqiniso,” kuchaza uFerreira izolo.
Njengamanje iCane Cutters iyona ezihola phambili kwi-log yeChampionship ngamaphuzu angu-27, emidlalweni engu-12.
Omunye angathi hleze uThongathi kufanele luzihluphe kakhulu ngesicoco seGladAfrica ngoba lungase luphazamiseke nxa lusheba umbango weligi neNedbank Cup. Kodwa uFerreira ubona ezakhe zingeke ziphazamiseke nakancane.
“Angiboni ukuthi sizophazamiseka. Isizathu esenza ngisho lokhu wukuthi sakhe abadlali abazimisele ukunqoba noma ngabe yimuphi umdlalo. Nokho kukhona okungikhathazayo. Ekhaya siwalahla kakhulu amaphuzu, sishaywe yiFree State Stars, sadlala ngokulingana neTTM kanye neTS Sporting. Ngokwami lokhu bekungafanele neze kwenzeke," kusho uFerreira. Eminye imiphumela yokuhlungela iNedbank Cup kwiGladAfrica Championship:
Free State Stars 1-2 TS Sporting; Jomo Cosmos 2-1 AmaTuks; Mbombela United 1-0 JDR Stars; Richards Bay 1-2 Ajax Cape Town; Swallows FC 1-1 Royal Eagles (3-4 kumaphenathi); Real Kings 3-1 Steenburg United; Jomo Cosmos 2 - 1 Pretoria University